ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, घाटी दुख्ने, आवाज घोक्रो हुने, रुघा लाग्ने, नाक बन्द हुने, छालामा डाबर आउने, आखा रातो हुने आदि भाइरल फिवरका लक्षणहरु हुन् । भाइरल फिबर आफै ठीक भइहाल्छ । यस्तो बेलामा आराम गर्ने, प्रशस्त तातो झोल पदार्थ खाने, धुलोमा नजाने…
टाउको दुख्ने समस्या धेरै मानिसमा भएको पाईन्छ । हामी सबैलाई कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने गर्छ । टाउको दुख्ने वित्तिकै डाक्टरलाई जचाउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । लामो समयदेखि टाउको दुखेमा वा अचानक वेस्सरी दुख्न थालेमा डाक्टरको परामर्श लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले टाउको दुख्ने व…
मानिसको मुटु मूठीको आकारको हुन्छ । यो अत्यन्तै बलियो मांसपेशीले बनेको हुन्छ । यसको तौल महिलामा २५० ग्राम र पुरुषमा करिब ३०० ग्राम हुन्छ । गर्भवती महिलाको पेटमा गर्भ भएको ३–४ हप्तामै भ्रुणको (Embryo) मुटु ढुकढुक गर्न थाल्छ । प्रत्येक मिनेटमा हाम्रो मुटु ६० देख…
माईग्रेन हेडेक: यो समस्या महिलामा वढी देखिन्छ । विशेष गरेर युवा अवस्थामै सुरु हुन्छ र ४०/ ५० वर्षसम्म रहन्छ । महिलामा धेरै देखिने कारण हार्मोनसंग संवन्धित भएको धारणा छ । पुरुषमा पनि माईग्रेन हेडेक १५ देखि ४० वर्षको उमेरमा बढी देखिन्छ । बृद्धा अवस्था…
पुट्ठा (हिप) को हाड भाँच्चिएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका एक व्यक्तिलाई रिसले गर्दा अस्पतालको शय्यामै ह्दयाघात भयो । मन नपर्ने व्यक्ति आफूलाई हेर्न आएपछि उनको रिस थामिएन । अस्पतालको शय्याबाटै उनले ती व्यक्तिलाई आउन दिएकोमा पत्नीलाई समेत धेरै रिस पोखे । ती व्यक्…
हामीले खाएको खानाबाट प्रोटीनको शरीरमा पाचनक्रिया पश्चात बन्ने विभिन्न बिकारहरु मध्ये युरिक एसिड पनि एक हो । शरीरमा बन्ने युरिक एसिड मृगौला भएर पिसाबको माध्यमले शरीर बाहिर निस्कन्छ । प्रोटिनहरु मध्ये विशेष गरेर प्यूरिन बाट एसिड बन्ने गर्दछ । अर्थात प्यूरिन…
खानपिन र जीवनशैलीमा सुधार ल्याएर ८० प्रतिशत भन्दाबढी मुटु र रक्तनली सम्बन्धी रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ । मुटुरोगले समस्त मानवजातिलाई नै आफ्नो चपेटामा लिराखेको बेलामा, खानपिन र जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनुलाई नै यो रोगको रोकथामको सर्वोत्तम उपाय मानिन्छ । उच्…
के के खाना मा ट्रान्स फ्याट बढी पाईन्छ , मुटुमा ब्लोकेज रोक्न यि खाना न खानुस् बनस्पती घ्यु केक , पेस्ट्री ,पाइ क्रिम पीजा , बर्गर ,सैन्ड्विच बिस्कुट, कूकिज ,क्रे…
American Heart Association Recommendations for Physical Activity in Adults Being physically active is important to prevent heart disease and stroke, World`s No. 1 and No.5killers. To improve overall cardiovascular health, we suggest at least 15…
यदी तपाईं मुटुरोग बाट बच्न चाहनुहुन्छ भन्ने निम्न लिखित कुरा हरुमा ध्यान दिनुस् । प्रायजसो अवस्था मा केही न केही मुटुरोगको जोखिम भएकै ब्यक्तीमा हार्ट अटेक , मस्तिस्कघात वा अन्य मुटुरोग लग्ने गर्छ। त्यसैले तपाईं सँग त्यस्ता मुटुरोग्का कुनै जोखिम हरु छन कि छैनन पत्तालगाउन…